HAFARI Malagasy Hampianatra infôrmatika ireo zanaky ny sahirana
Fanotorana tany eny Ankazomanga sy Andranomahery Hamoahan’ny CUA didy fampiatoana
Noho ny fitarainan’ireo mponina amin’ny faritra iva eto Antananarivo Renivohitra amin’ny fanotofana tany tsy ara-dalàna ka miteraka sahady rano miakatra amin’ireny faritra iva ireny, dia nidina ifotony teny Andranomahery- Ankazomanga Boriborintany faha-6, sy teny Amboditsiry-Marais Masay Boriborintany faha-5, ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky.
Nahazo toho-drano vaovao ny ao amin’ny kaominina ambanivohitra Tsiafajavona distrikan’Ambatolampy.
Hampianatra infôrmatika sy teny vahiny maimaimpoana toy ny anglisy sy “mandarin” ho an’ireo zanaky ny sahirana ara-pivelomana eny amin’ny faritra iva ny fikambanana HAFARI Malagasy.
Omaly no nanokafana tamim-pomba ofisialy ny ivontoerana mifandraika amin’izany, eny Anosizato Atsinanana, ahitana solosaina vaovao miisa folo avy amina fikambanana mpanamboatra solosaina any Frantsa. Nambaran-dRafanomezantsoa Jean Nirina, filoha nasionalin’ny HAFARI Malagasy fa ny hanampiana ireo ankizy tsy afaka mianatra intsony, noho ny fahasahiranan’ireo ray aman-dreny, no tena antony nananganana azy ity. Lohalaharana ireo monina eny amin’ny faritra iva, ka hahafahan’izy ireo miditra eo amin’ny sehatry ny asa avy hatrany, aorian’ny fahavitan’ny fianarany. Betsaka mantsy amin’izao ireo ankizy zary lasa manaotao foana, hoy hatrany ity filohan’ny HAFARI ity, noho ny fahasahiranana, indrindra fa ny tovovavy kely. Omaly ihany dia efa nisokatra ny fisoratana anarana ary hanomboka tsy ho ela ny fampianarana. Ora roa isan’andro no mianatra ny mpianatra, ka mpampianatra efa matihanina avokoa no hanofana azy ireo. Nohamafisin-dRafanomezantsoa Jean Nirina fa tsy izay mahazo seza ihany no afaka mandray andraikitra ary tsy natao hanambatambazana olona na hividianana olona ny asa sosialy tahaka izao fa entina hanampiana ny mpiara-belona.